App Press: Iyo Mobile App Dhizaini yeVakagadziri | Martech Zone
Svondo, Ndira 27, 2013 China, June 18, 2015 Douglas Karr
App Dzvanya yakagadzirwa kuvharidzira iyo gwanza reruzivo pakati pevagadziri vemifananidzo nevakagadziri. Semugadziri, muvambi Grant Glas aida kuvaka maapplication kodhi mahara. Semugadziri, Kevin Smith akanyora mhinduro. Vakagadzira maapplication makumi matatu nematatu vachishandisa yekutanga vhezheni yeApp Press uye kubvira pakatanga, vashandisi ve32+ vakagadzira maapps papuratifomu yavo.
App Press yakasikwa kutaridzika senge Photoshop uye inoshanda seKeynote. Izvi zvinobvumira chero mugadziri kusvetukira mukati otanga kuvaka ipapo ipapo. Hapana chimwe chishandiso chekugadzira app chinotaridza uye chinoshanda seApp Press.
App Dzvanya Zvimiro
Kurongeka Mupepeti - Tanga kugadzira yako app mukati memaminetsi uchishandisa dhizaini dhizaini. App Press inotanga sevhisi isina chinhu uye inobvumidza iyo dhizaini kugadzira mapeji achishandisa iyo yekugadzika pfungwa. Isa matara pamapeji wobva wasarudzika kubata kwakabvumidzwa mashandiro. Batanidza kune mamwe mapeji mune yako app kana ekunze mawebhusaiti kuburikidza ne hotspot materu; gadzira mitsara kana isina-mitsara kufamba. App Press iri padandemutande uye haidi kuisirwa software. Izvo hazvina basa kana iwe uri paMac kana PC, kumba kana kubasa, iwe unogona kuwana ako ekugadzira chero kupi, chero nguva.
Asset Raibhurari - Rongedza maturu ako ese eapps muraibhurari yako yeasset. Kune imwe inokurumidza uye yakapusa nzira, batanidza yako Dropbox account uye bvisa iyo yekukodha maitiro zvachose. Chikwata chedu chevagadziri chakaisawo pamwechete mahara emahara zvinhu. Izvi zvinhu zvinosanganisira mabhatani, kumashure, misoro uye tsoka izvo chero munhu anogona kushandisa muapp mavo. Iyo Basic App Press account inotanga ne100 MB yenzvimbo yeyako raibhurari uye iyo Pro account ine 500 MB.
Kutanga Kugadzira Izvozvi - Iyo yekumisikidza yekusika maitiro inozivikanwa kune chero mugadziri. Sezvo Photoshop 3.0 yakaunzwa muna1994, kumisikidza yave iri nzira inovimbwa yemugadziri wese. Kuita iyo pfungwa muApp Press inobvumira kunyangwe junior dhizaini yekugadzira maapps zvinobudirira uye zvinobudirira. Sarudza dura kubva kune yako Asset Raibhurari uye uiise pane yako Layout Edhiyo isina chinhu canvas. Iyo dhizaini dhizaini iri nyore, yakapusa uye yakachena.
Gadzira Zvikamu uye Mapeji - Chirongwa chakagadzirwa muApp Press chinobata kubata uye kutaridzika kwechimedu chedhinda chakanyorwa nepfungwa yekufambisa yewebhusaiti. Gadzira zvikamu kuti ugadzire isina-mitsara yekufamba yakabatana pamwechete kuburikidza ne hotspots kana kuvaka linear yekufamba iyo inoyerera kunge magazini. Gadzira chiitiko chakasiyana nechero ipi kushandisa App Press.
Nyore Hotspots - Kurumidza wedzera kubata kwekufambisa uye mashandiro kune yako app ine hotspots. Kune matatu matatu akasiyana hotspot mhando muApp Press iyo inokutendera iwe kuti ubatanidze mapeji ako pamwechete, kudhonza kumusoro kwewebhu zvemukati kana kubatanidza imwechete tap Twitter uye Facebook kugovana.
App Press yakagadzirawo yavo Muongorori App. Iyo app inobvumidza iwe kuti utarise ipapo ipapo app yako pane chero chishandiso. Iyi yemahara app inowanikwa pane iyo App Store, Google Play uye sewebhu webhu. Isa iyo pane yako iPhone, iPad, iPod Kubata, Android inotungamirwa foni uye / kana piritsi kuti uone chero shanduko dzaunoita.
Unogona kutarisa zvimwe zvekushandisa zvakagadzirwa paApp Press pane yavo saiti.
Tags: android appapp dzvanyaapppressipad appiphone appMobile Anwendungnharembozha app dhizainipiritsi app
Zvakanaka. App Press ipuratifomu yakanaka yevanogadzira uye vanogadzira. Iyo inovhara musiyano padyo.